FAMOIZANA AINA : Hoentina any Ambilobe anio ny nofo mangatsiakan’ny Pr Zafy Albert
Ny sabotsy hariva lasa teo tokony ho tamin’ny 4 ora no nigadona teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny vatana mangatsiakan’ny Filoham-pirenena teo aloha, ny Profesora Zafy Albert. 16 octobre 2017
Tonga maro teny an-toerana nitsena sy nanome voninahitra ny fahatongavany ireo filohan’ny andrim-panjakana amin’izao sy teo aloha, ny filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka mivady ary ireo manam-boninahitra sy olon-tsotra maro.
Avy hatrany dia nihazo ny trano fonenany tetsy Ivandry ny razana taorian’izay. Araka ny fandaharam-potoana avy tamin’ny fianakaviana dia noentina nandrasana tetsy amin’ny kianjan’ny kolontsaina Mahamasina ny vatana mangatsiakany, omaly izay narahin’ny Sorona Masina natao tao amin’ny Ekar Antanimena izay notarihan’i Mgr Odon Marie Arsène Razanakolona, Arsevekan’Antananarivo.
Androany kosa dia hisy ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana lehibe izay hotanterahina etsy Mahamasina ho fanaovam-belona azy farany ary aorian’io no hoentina hianavaratra ny vatana mangatsiakan’ity filoham-pirenena teo aloha ity. Ny sabotsy 21 oktobra kosa no hasitrika ao amin’ny fasan-drazany ao Betsiaka-Ambilobe ny razana, araka ny fandaharam-potoana avy amin’ny fianakaviana hatrany. Marihina fa tamin’ny fotoana nigadonan’ny nofo mangatsiakan’ity filoham-pirenena teo aloha ity teny Ivato no efa nanomboka ny andro fisaonam-pirenena ka hatramin’ny fotoana hanatanterahana ny fandevenana.
Mahatsiaro very andry niankinana
Manoloana izao fahalasan’ny Profesora Zafy Albert izao dia mahatsiaro ho very andry niankinana tanteraka ny ny ao Ambilobe, indrindra ny Kaominina Betsiaka, izay nahalatsahan’ny tavoniny. “Very olomanga izahay”, hoy ireo mponina. Amin’ny ankapobeny dia tena mibahan- toerana ao am-pon’izy ireo ny fahatsorana nananan’ity filoham-pirenena teo aloha ity, fony izy mbola teo amin’ny fitondrana. Ahatsiarovan’ny olona azy indrindra ihany koa ny fandalàny ny fihavanana sy ny fahadiovam-po nananany. “Tsy mbola nisy filoham-pirenena tahaka azy.
Tsotra loatra sy tia fihavanana ny filoha Zafy Albert. Raha nalaina teo amin’ny toerana maha filoham-pirenena azy izy tamin’izany fotoana izany dia tsy mba nanohitra fa nanaiky izay fandaminana rehetra ary niala tsy nisy romoromo. Tena nampiavaka azy ihany koa ny fanakaikaizany ny vahoaka satria dia saika novitainy tamin’ny alalan’ny fandehanana fiara avokoa ireo fitetezam-paritra nataony tamin’izany”, hoy ny fanehoan-kevitr’ireo mponina ao Ambilobe.
Mahatsiaro banga tanteraka ny mponin’Ambilobe amin’izao nahalasany izao. Tsy izy ireo ihany anefa fa ny vahoaka Malagasy iray manontolo mihitsy satria maty namela mamy toy ny tantely teto amin’ny firenena ny tenany. Izy no rain’ny demokrasia, izy no anisan’ireo tena nilofo mafy tamin’ny fampanjakana ny fampihavanam-pirenena teto Madagasikara.